Wenger Oo Sheegay Inuu Fursad Siinayo laacibiinta Da’ada Yar Xilli Ciyaareedkan - jornalizem
Wenger Oo Sheegay Inuu Fursad Siinayo laacibiinta Da’ada Yar Xilli Ciyaareedkan
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay in uu rajaynayo in uu siinyo fursad laacibiinta da’da yar si ay banaanka isku soo dhigaan xilli ciyaareedka soo socda.
62-sano jirkan leyliya Arsenal ayaa kulanadii ay kooxdiisu uga qeybgashay Bariga Fog waxa uu soo safay ciyaaryahano isugu jira kuwo hore loo yiqiin iyo qaar kale oo ah ciyaaryahano da’ yar. Waxana uu sheegay in uu aad ula yaabay kartida ay muujiyeen ciyaaryahanadii da’ada yareyd.
Mid kamid ah da’yartii ku soo barbaartay kooxda Arsenal Chuks Aneke iyo ciyaaryahanka da’ada yare e hore ugu ciyaari jirey kooxda Dortmund Thomas Eisfield ayaa labaduba waxa ay dhaliyeen goolal kulankii ay Arsenal la yeelatay Malaysian XI halka Ryo Miyaichi iyo Benik Afobe ay aad u soo jiiteen indhaha kulamadii tijaabada ahaa ee kooxda Arsenal.
Wenger waxa uu sheegay in uu aad ula dhacay ciyaaryahanada da’ada yar uuna rajaynayo in xilli ciyaareedka soo socda ay ka mid noqon karaan ciyaaryahanada safka hore ee kooxda Arsenal.
“Waxaan haysanaa ciyaaryahano da’ yar oo waayo aragimo leh. Tusaale ahaan haddii aan ku iraahdo Alex Oxlade-Chamberlain, waxaad i oran doontaa waa dhalinyaro balse waa 18jir kaliya,” ayuu Wenger ku sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay Hong Kong.
“Jack Wilshere waa 20 jir, Aaron Ramsey waa 21jir waxaan kale o aan haysanaa ciyaaryahano da’ yar oo madax la soo kici doono xilli ciyaareedkan.
“Safarkeenii bariga fog waxaa karti soo bandhigey Chuks Aneke iyo Ryo [Miyiachi]. Waxaa sidoo kale noo jooga ciyaaryahano dhalinyaro ah oo da’doodu tahay 16 iyo 17 sano jir kuwaasoo aan safarka nagu wehelin balse waxa ay ka dhex muuqan doonaan kooxda xill ciyaareedka soo socda. Waxaan rajo weyn ka qabnaa in aan fulino waxa aan dooneyno oo ah aan sare u qaadno dhalinyarada oo aan siino fursad.”